Waxyaabaha Kale ee Waxsoosaarka Waxsoosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha ah - Shiinaha Warshad Kale oo Firfircoon
Keratin Hydrolyzed 100% ilo dabiici ah (baalal), milix aad u fiican, xasilooni sare, oo aan lahayn wax ilaaliyayaal ah.Keratin waxaa loola jeedaa qoys leh borotiinno qaabdhismeedka buunshada leh. Keratin waa sheyga qaabdhismeedka muhiimka ah ee ka kooban lakabka sare ee maqaarka aadanaha. Sidoo kale waa qaybta ugu muhiimsan ee qaab dhismeedka timaha iyo ciddiyaha. Monomers Keratin monomers ayaa isugu soo urura xirmooyin si ay u sameeyaan fiilooyin dhexdhexaad ah, kuwaas oo adag oo aan la milmi karin oo sameysma unugyo xoog leh oo unminralized ah oo laga helo xamaarato, shimbiraha, amphibians, iyo naasleyda. The ...
Gamma Poly-glutamic acid (γ-PGA) waa wax dabiici ah oo ku dhaca, shaqooyin badan, iyo biopolymer biodegradable. Waxaa lagu soosaaraa halsano Bacillus subtilis iyadoo la adeegsanayo astaamaha glutamic. PGA wuxuu ka kooban yahay monomers acid glutamic acid oo isku xiraya kooxaha groups-amino iyo γ-carboxyl. Waa biyo-milmi kara, cuni kara oo aan sun ahayn, waana deegaan ku habboon deegaanka. Waxay leedahay codsiyo ballaaran oo ku saabsan dhinacyada daawada, cuntada, qurxinta, iyo daaweynta biyaha. Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah: Muuqaalka Caddaanka ...
Sodium Hyaluronate waa cusbada sodium ee Hyaluronic acid, waxaa si fiican loogu yaqaanaa cunsur dabiici ah, halsano aan asal ahaan ka soo jeedin bakteeriyada, wasakhda aad u hooseysa, ma laha wasakhda wasakhda kale ee aan la garanayn iyo habka wax soo saarka noolaha ee cudurada keena. Codsiyada: Sodium Hyaluronate waxay u shaqeysaa sida saliidaynta iyo sameynta filimka, qoyaanka, ka hortagga dhaawaca maqaarka, weynaanta iyo xajinta emulsion ee alaabada daryeelka maqaarka, sida kareemka, emulsion, nuxurka, lotion, gel, maaskaro wajiga, lipstic, hooska indhaha ...
Kalluunka 'Collagen Peptide' waa nooc ka mid ah 'collagen peptide', waxaa laga soo qaadaa miisaanka kalluunka Tilapia iyo maqaarka ama kalluunka kalluunka kalluunka ee loo yaqaan 'enzymatic hydrolysis' oo heerkulkiisu hooseeyo. Kalluunka loo yaqaan 'Collagen peptides' waa ilaha kaladuwan ee borotiinka iyo cunsur muhiim u ah nafaqada caafimaadka leh.Quruxdooda nafaqada iyo jir ahaaneed waxay sare uqaadaan caafimaadka lafaha iyo kalagoysyada, waxayna wax ku darsadaan maqaarka quruxda badan. Collagen Peptide). Macdanta ceyriinka ...